Maamulka K/Galbeed oo sheegay inay dileen AlShabaab Miino Aasayay | Allbalcad Online
Home WARARKA Maamulka K/Galbeed oo sheegay inay dileen AlShabaab Miino Aasayay
Maamulka K/Galbeed oo sheegay inay dileen AlShabaab Miino Aasayay
Ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ayaa howlgallo qorsheysan oo ka dhan ahaa Ururka Al-Shabaab waxaa ay ka fuliyeen Degmada Qansax-dheere ee Gobolka Baay.
Saraakiisha howlgalka hoggamineysay ayaa waxaa ay sheegeen in ujeedka hwlgalkooda uu ahaa sidii ay uga hortegi lahaayeen weerarada Al-Shabaab iyo qaraxyada ay geystaan.
Guddoomiye ku xigenka amniga iyo siyaasada ee Degmada Qansaxdheere Maxamed Mukhtaar Cabdi oo lahadlay Warbaahinta Ciidamada Qalabka Sida ayaa sheegay in Ciidanka Daraawiishta ay dileen laba Sarkaal oo doonayay iney ku Aasaan miino.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in howlgalka ay Ciidamada Al-Shabaab kaga furteen qori AK 47 ah iyo Baastoolad, hawlgakuna uu ku dhamaaday sidii loo qorsheeyay , isla markaana aysan wax khasaaro ah soo gaarin dadka Shacabka ah.
Ugud ambeyn Guddoomiye ku xigenka amniga iyo siyaasada ee Degmada Qansaxdheere Maxamed Mukhtaar Cabdi waxaa uu sheegay in Goobta ay howlgalka Ciidamada ka gliyeen laga soo abaabuli jiray weerarada Al-Shabaab iyo qaraxyada, isla markaana howlgalka ay si wadi doonaan.
Degmada Qansax-dheere ee Gobolka Baay ayaa waxaa dhowr jeer ka dhacay dagaalo u dhaxeeyay Ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed iyo Al-Shabaab kadib markii Shabaab ay weerareen Saldhigyada Ciidamada.
Previous articleQarax lala eegtay Ciidamada Kenya & khasaaro ka dhashay
Next articleDowladda Soomaaliya oo taageertay xariga Boqorka Urdun Walaalkiis